DOWNLOAD Commonwealth of Dominica FSX & P3D - Freeware
Ny Commonwealth of Dominica dia firenena sy nosy iray ao amin'ny nosy Karaiba, eo anelanelan'ny nosy frantsay Guadeloupe sy Martinique.
Sehatra kanto mamerina ny zavamaniry tropikaly sy ny faritra onenanany amin'ny alàlan'ny fahatsapana ny "autogen" mahery sy maranitra. Ho tia ny mpanoro hevitra.
Ny fanontana dia hanova ny rakitrao fsx.cfg (prepar3d.cfg) baiko mba hampitombo ny autogen (fananganana otrik'aretina). Rehefa te-hanafoana ilay toerana ianao dia hamerina ny rakitrao ny installer fsx.cfg (prepar3d.cfg).
Ny fampahalalana fanampiny dia hita ao amin'ny menio Start -> Add-ons Rikoooo -> Commonwealth of Dominica FSX & P3D"
Ny fametrahana dia 100% automated ny Rikoooo, ny configurator dia hitantana anao ny fisoratana anarana sy ny fampahavitrihana ny toerana hita ao amin'ny Flight Simulator .. Rehefa esorina ny rindrambaiko dia haverina amin'ny laoniny ny fiavianao.
Caution lehibe rakitra 134 MB, Izany no nanolorana azy ho mampiasa ny Download rindrambaiko Mandehana mafimafy kokoa mba hiato kely sy indray amin'ny fotoana ny fisamborana mba tsy ampoizina (ohatra FlashGet).
Zava-dehibe, ny fomba fampiasana ny toerana manodidina? Manomboka ny sidina amin'ny "Canefield Intl" (TDCF) Na "Melville Hall" (TDPDZavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy, tsy nisy teny manokana voalaza FSX / P3D:
Downloads 26 174
Valladier Jean Louis (koupi) sy Zev C. Richards